NamasteNEPALI.com: प्रधानमन्त्री निवासबाट हराएका भाँडाकुँडा एमाले कार्यकर्ताको घरमा
प्रधानमन्त्री निवासबाट हराएका भाँडाकुँडा एमाले कार्यकर्ताको घरमा
२३ साउन, काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालकोट सरेपछि खाली भएको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भान्साका सामानहरू एकाएक हराएको खबरहरू सार्वजानिक भएपछि सबैले चासोका साथमा हेरे ।
तर कसले लग्यो ? भन्ने कुरामा धेरैको ध्यान जान सकेन । प्रधानमन्त्रीको भान्छाबाटै भान्छामा प्रयोग गरिएका सामानहरू हराउनु भनेको असमान्य कुरा हो । ओली बालकोट नसर्दा सम्म प्रयोग गरेको भाँडाकुँडा बालुवाटार छोड्ने बित्तिकै कसरी हरायो ? र कसले लग्यो भन्ने बिषयको छानविन हुनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भान्साका सामानहरू कर्मचारीहरूले घर/घरमा लगेको हुन सक्ने अनुमान गरिएपनि बालुवाटारमा खटिएका कर्मचारीले यो आरोप स्वीकार गर्न तयार छैनन् । विगत आठ बर्ष देखि बालुवाटारमा सरसफाइको काम गर्ने एकजना कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने- ‘गलत काम जति सबै हामी कर्मचारीलाई आरोप नै आरोप लगाउने हो भने भाँडाकुँडा कसले लगेको हो हामी पनि पोल खोलि दिन्छौँ ” । उनले दाबीका साथ भने- “ओली बालकोट सर्नु भन्दा एक दिन अगाडी चार जना कार्यकर्ता रित्तै आएका थिए तर फर्कने बेलामा चार बोरा सामान रातो रंगको कारमा हालेर लगेको मेरै आँखाले देखेको हुँ ।”
बालुवाटारभित्र को छिरे को छिरेनन भन्ने रेकर्ड गेटमा बसेका प्रहरीहरूले नियाल्छन् । ओलीले राजिनामा दिएपछि अघिपछि भन्दा जाँच झनै कडा बनाइएको थियो । प्रहरीसँग बुझ्दा सरसफाई गर्ने कर्मचरी र प्रहरीको भनाइ उस्तै उस्तै देखिन्छ । साँझ चार बजेर बिस मिनेट जाँदा एमालेका कार्यकर्ता हौ, अन्तिम भेट हो भन्दै रित्तो हात छिरेका तर बाहिर निस्कने बेला समान लिएर आएको प्रहरीको भनाइ छ । नाम नखुलाउने सर्तमा ति जवानले भने- “शंका लागेपनि सोध्ने कुरा भएन्, उपहार होला भन्ने लाग्यो तर भोलि पल्ट भाँडा हरायो भन्दा छक्क परियो” ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निवास छाड्दा यसरी सामानहरू चोरी हुने र हराउने गरेको यो पहिलो घटना होइन् । विगतमा पनि यसैगरी सामानहरू हराउने गरेका थिए । सरकार परिवर्तन भएर मन्त्रीहरूले क्वार्टर छोड्दा धेरैले पर्दा, फ्रिज, टेलिभिजन, कम्प्युटर जस्ता सामानहरू उठाउने गरेको गुनासो बालुवाटारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको छ । उनीहरुका अनुसार केही मन्त्रीले साना फर्निचर र सोफामा लगाइएका खोल र चकटी मात्र होइन लान मिल्नेसम्मका सबै सामानहरू लैजान्छन ।
ओलीको भान्छाबाट दुइ दर्जन बटुका, २ थान राइस कुकर चार दर्जन चम्चा स्टिलको थाल, काँचका गिलासहरू हराएका छन् । यति मात्र होइन एक फ्रिज, एक टेलिभिजन, २ थान कम्प्युटर र खाटमा ओछयाइने तन्नासमेत रातारात गायब पारिएको छ ।
निर्वतमान प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटार छाडेर जानु परेपछि कतिपय कार्यकर्ताहरूले पर्दा च्यातिदिने र बोक्न नसक्ने फर्निचरहरू कोर्ने जस्ता निकृष्ट काम पनि गरेको त्यहाँका कर्मचारीको अनुभव छ । ती कर्मचारी भन्छन्, “कतिपयले भित्तामा टाँसेर राखेको एसीसमेत सँगै लैजान्छन् । हिजो एकजनाले यो एसी निकाल्ने कसरि हो लैजान भन्नु भएको छ भन्दै सोधेका थिए ।”
यसैबिच हराएका भाँडाकुँडाको खोजतलासका लागि प्रहरीले गोप्य अनुसन्धन थालेको छ । स्रोत भन्छ-“त्यो दिन साँझ चार बजेर २० मिनेट जाँदा सम्मको आसपासमा धेरै मानिसहरूको छलफल भएपनि जाँदा रित्तै र फर्कंदा सामान बोकेर आउनेहरूको अनुसन्धान थालेका छौ । हामीले अनुमान गरेका ति चार जना एमाले कै कार्यकर्ता भएको बुझिएको छ । बनेपा घर भएका ति कार्यकर्ता मध्ये दुई जना घट्टेकुलो, एकजना सामाखुसी र अर्का एकजना भने बालकोट नजिकैको घरमा डेरामा बस्छन् । उनीहरूको डेरामा पुग्दा समान सजाएर राखेको अवस्थामा भेटियो त्यो सामानहरू कुन प्रयोजनका लागि डेरामा ल्याइयो बुझ्दैछौ ।”
यसैबिच पुष्पकमल दाहल (प्रचण्ड)ले प्रधानमन्त्री निवासमा चाहिने आधारभूत सामान बाहेक अन्य सामान खरिद नगर्ने बताएका थिए । उनले तत्काल खाना पकाउने भाडा कुडा, सुत्ने लत्ता कपडा मात्रै किन्न भनेका थिए । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बालुवाटारमा सर्न लागेको थाहा पाएपछि कर्मचारीहरूले भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडा र तन्नाहरू नयाँ किन्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा केही पनि नयाँ सामानहरू नकिन्न र पुरानै सामानहरूबाट काम चलाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
- टिभी अन्नपूर्ण